स्वास्थ्य शैली - Ratopati
बसाइ र हिँडाइमा ध्यान दिदा के फाइदा ?
डा. मंगल रावल हाडजोर्नी विशेषज्ञ खुट्टाको जोर्नीमा समस्या भएकाले पलेँटी कसेर बस्नु हुँदैन । उकालो–ओरालो कम हिँड्ने र हिँड्दा बिस्तारै हिँड्ने । घुँडा खुम्च्याएर नबस्ने । धेरै ठूलो भारी बोकेर हिँड्नु हुँदैन । त्यसले जोर्नीमा बढी दबाब पर्न जान्छ । ढाडको समस्याबाट बच्न निहुरिँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । ठूलो सामान उचाल्दा पहिले ..
दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जिउन मध्यम उपवास
डा. दिनेशप्रसाद बराल सोहम योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, लोकन्थली प्राकृतिक..
तन र मनको सन्तुलन राख्न ताडासन
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक धेरै मानिसमा सम्झन नसक्ने तथा दिमागमा पनि धेरै कुरा खेल..
टिभीको लत छुटाउने ५ उपाय
निक काम सकेर फुर्सदमा टेलिभिजन हेर्नु राम्रै हो । आवश्यकताअनुसार आफूलाई मन पर्ने..
तपाईंलाई थाहा छ सुर्ती र रक्सी सँगै खाँदा क्यान्सरको जोखिम कति बढछ ?
डा. राजेन्द्र बराल क्यान्सररोग विशेषज्ञ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अव्यवस्थित जीवन..
कम डोज औषधिमै सर्पदंशका बिरामीको उपचार
चितवन, १५ वैशाख । विगतको तुलनामा कम भाइल ‘एन्टिस्नेक भेनम’ले सर्पदंशका बिरामीलाई निको पार्न थालिएको छ । एउटा बिरामीलाई एक सय ६५ भाइलसम्म एन्टिस्नेक भेनम दिइने गरेकामा अनुसन्धानपछि ३० भेनम भन्दा बढी दिनु नपरेको पुष्ठी भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । स्विजरल्यान्डको जेनेभा विश्वविद्यालयको सहयोगमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान..
मृत्युको कारण बन्न सक्छ यो भिटामिनको कमी, थाहा पाउनुस् १० संकेत
एजेन्सी बैशाख १५ – चर्चित अमेरिकी स्वास्थ्य विज्ञ डा. मर्कोलाले एउटा यस्तो अनुसन्धान गरेका छन् जसमा ८० प्रतिशत वयस्कमा यस्तो भिटामिनको कमी पाइएको छ जुन जीवनका लागि खतरनाक साबित हुनसक्ने बताइएको छ । यो भिटामिन बी १२ हो जसको चर्चा साधारण रुपमा कम नै हुने गर्दछ । किन हुन्छ यसको कमी घातक ? भिटामिन बी१२ […]
स्वाइनफ्लुबाट कसरी बच्ने ?
डा. केदार कार्की स्वाइन फ्लु भनेर चिनिने इन्फ्लुएन्जा एच१एन१ नामको भाइरसको सङ्क्रमणले मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । विशेषगरी सुँगुरमा पाइने यो भाइरस आफनो आनुवांशिक गुण परिवर्तन गरेर मानिसमा फैलिने गर्दछ । यो भाइरस साधारण फ्लुको भाइरस जस्तैगरी फैलिन सक्छ । जब कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्छ वा हाच्छ्युँ गर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिले नि..
आफ्नो स्वास्थ्य शारीरिक तथा मानसिक रूपमा बलियो बनाउने चाहना त सबैको हुन्छ । तर, व्यस्त दैनिकी तथा लापरबाहीका कारण मानसिक रूपमा तयार भए पनि शारीरिक रूपमा अल्छी भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा दाँत तथा गिजाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउने कोसिस हँुदाहँुदै पनि बेवास्ता हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, यसरी बेवास्ता गरेर जे पायो त्यही परिकारमा ध्यान..
डा. राजेन्द्र बराल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आधुनिक जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले मानव शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग उत्पादन भइरहेका छन् । जथाभावी खानेकुरा सेवन गर्दा पछिल्लो समय मानिसमा विभिन्न जटिल प्रकारका रोगले आक्रमण गरिरहेको छ । यस्ता रोग लाग्नुमा केही दोष आफ्नै हुन सक्छन् भने केही दोष वातावरण तथा समा..
संसारभर सबैभन्दा बढी प्रयोग चलाइने स्मार्ट फोनको अपरेटिङ सिस्टम हो, एन्ड्रोइड । सोही कारण एन्ड्रोइड प्रयोगकर्तालाई आफ्नो जालमा फसाउने प्रयासमा रहन्छन्, ह्याकर्सहरू । जसका लागि उनीहरु हरेक समय नयाँनयाँ तरिका प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताले सजिलै कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गरोस् र उनीहरूको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने लोभमा ..
डा. मीरा हाडा, स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ नेपालमा पछिल्लो समय गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो छ । गर्भनिरोधक चक्की तथा साधन प्रयोगको सही तरिका थाहा नपाउँदा यस्तो समस्या बल्झिरहेको हो । कतिपयले गर्भनिरोधक चक्की कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने थाहै नपाई सेवन गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, कतिपयले भने यसलाई गर्भनिरोधक साधनका रूपमा प..
आदर्श प्रधान, मनोपरामर्शदाता, होलिस्टिक माइन्ड्स, धापासी व्यस्त जीवनशैलीले शारीरिक थकान त दिन्छ नै, मानसिक रूपमा पनि तनाव उत्पन्न गराउँछ । तनावपूर्ण अवस्थामा काम गर्दा प्रतिफल पनि सोचेअनुरूप नआउन सक्छ । यस्तोमा सामान्य उपाय अपनाएर पनि घर तथा कार्यालयमा तनावलाई कम गर्न सकिन्छ । कार्यालयमा हुने तनाव कम गराउन अपनाउन सकिने सज..
बुटवल, १३ वैशाख । आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारको लागि सरकारले दिने निःशुल्क सेवा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारमा रु एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णयअनुरुप मुटु यस्तो सेवा उपलब्ध गराइएको सो अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले..
एजेन्सी बैशाख १२ – के तपाईंलाई थाहा छ, गर्भमा हुर्किरहेको शिशुले आमाको सबै कुरा सुन्न सक्छन् ? मेडिकल साइन्समा गर्भसँग जोडिएका केही यस्ता कुराहरु छन् जुन सुन्दा निकै अचम्म लाग्दा छन् र विश्वास गर्न मुश्किल छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै वास्तविकताबारे जानकारी दिँदै छौं जुन सुन्दा निकै अचम्मका लाग्छन् तर हुन् सत प्रतिशत सही [&helli..
एजेन्सी बैशाख १२ – साधारणतया महिनावारी पर सार्नका लागि महिला औषधीको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर यस्ता औषधीका केही साइडइफेक्ट पनि छन् । यसबाट बच्नका लागि प्राकृतिक तरिका अपनाएर महिनावारी पर सार्न सक्नुहुन्छ । नेशनल इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद, जयपुरका डा. सी आर यादवका अनुसार यी खानेकुरा महिनावारी हुनुभन्दा सातदिन अघिदेखि खाए महिनावारी प..
के अरुको तुलनामा लामखुट्टेले तपाईंलाई धेरै टोक्छ ? थाहा पाउनुस् यसका १० वैज्ञानिक कारण
एजेन्सी बैशाख ११ – यदि तपाईं ती मानिसहरुमध्ये हुनुहुन्छ जसलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ ? यदि यसको उत्तर ‘हो’ मा आउँछ भने यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण हुनसक्छ । सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको एक ताजा अनुसन्धान अनुसार महिलाहरुको तुलनामा पुरुषलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ । एन्टोमोलोजिस्ट डा. एम.एम महुलियाका अनुसार लामखुट्टेले ..
शरिरको यी पाँच स्थानमा कोठी भएका व्यक्ति भाग्यमानी
एजेन्सी बैशाख ११ – ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई शरिरका यस्तो स्थान बताउँदैछौं जहाँ कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ । १. भाग्यको कोठीः मानव शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा कोठी हुने गर्दछन् । केही मानिसहरुलाई शरिरको यो कोठी निकै राम्रो लाग्छ भने कतिलाई यस्तो कोठी घृणा लाग्छन् । तर कोठी कुन स्थानमा हुन्छ, [&helli..
कस्ता व्यक्तिले रक्तदान गर्ने ?, यी हुन् रक्तदानका फाइदा
–केदारनाथ नेपाल ‘निश्चल’ रगतविना जीवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आकस्मिक कारणले अकालमा ज्यान जान लागेको मानिसलाई बचाउने विकल्प रक्तदान नै हो । कुनै पनि बेला जोसुकैलाई रगत चाहिन सक्छ । स्व–इच्छाले रगत दान गर्नुलाई नै रक्तदान भनिन्छ । रक्तदान गरिसकेपछि दान गर्ने व्यक्तिले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ । नेपालमा वि.सं. २००० सालदेखि र..
मासुभन्दा धेरै प्रभावकारी छन् यी १० शाकाहारी खानेकुरा, स्वस्थ हुन पक्कै खानुहोस्
एजेन्सी बैशाख १० – मासुमा प्रोटिनको मात्रा शाकाहारी खानाको तुलनामा धेरै हुने गर्दछ । तर यसमा शरिरका लागि चाहिने अन्य तीन पोषक तत्व आइरन, फाइबर र क्याल्सियमको मात्रा कम हुन्छ । त्यसकारण विशेषज्ञ थुप्रै शाकाहारी खानालाई मासुभन्दा स्वस्थ र शरिरका लागि अत्यावश्यक बताउँछन् । भारतको ग्रेटर कैलाश अस्पतालकी डाइटिशियन डा. विनिता जायसवाल ..
के तपाईंको कपाल सेतो भइरहेको छ, अपनाउनुस् यी घरेलु तरिका
ओन्ली माई हेल्थ बैशाख ९ – यस्ता थुप्रै घरेलु उपाय छन् जसले सेतो कपालको समस्यालाई टाढा राख्ने गर्दछ । आउनुहोस्, यस्तै घरेलु तरिकाबारे जानकारी दिँदै छौं । १. सेतो कपालको समस्याः कपाल उमेर हुनुभन्दा अघि नै सेतो हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । यसका लागि थुप्रै मानिसहरुले कलरको प्रयोग गर्दछन् । यद्यपी, कलरले कपालको […]
मिर्गौला जोगाउन यसो गरौँ
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, असन्तुलित खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैली मिर्गौलारोग लाग्ने मुख्य कारण हुन् । त्यसैले सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । कम्तीमा वर्षमा एकपटक रगत र पिसाब जाँच गरेर मिर्गौलाको अवस्था बुझिराख्नुपर्छ । खाना खाएलगत्तै सुत्नु राम्रो हँुदैन । खाना ..
निरोगी हुन यस्तो जीवनशैली चाहिन्छ
डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट पूर्वमहानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग दिनभरि टेबलवर्क गर्ने, बढी टिभी हेर्ने, किताब पढ्ने, कम्प्युटरमा काम गर्ने, भिडियो गेम खेल्ने, मोबाइलफोन चलाइरहनेजस्ता जीवनशैली अपनाउँदा शरीरमा अनेकौँ विकार पैदा हुन्छन् । दिनहुँ लगातार पाँच घन्टासम्म यस्तो कार्य गर्नु तर व्यायाम नगर्नुलाई निष्क्रियता मानिन्छ । त्यस..
टन्सिल बिग्रँदा हुन सक्ने जटिलता यस्ता हुन्छन्
डा. विष्णुरथ गिरी बालरोग विशेषज्ञ घाँटीमा दुखाइको महसुस भएमा टन्सिलमा संक्रमण भएको हुन सक्छ, जसले गर्दा ज्वरो आउने तथा खोकी लाग्ने समस्या निम्तिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा टन्सिल अवलोकन गरियो भने टन्सिल रातो देखिन्छ । साथै, त्यहाँ चिप्लो ‘म्युकस’ वा पिपजस्तो पदार्थसमेत देखापर्न सक्छ । तर, संक्रमण नभई ठूलो मात्र भएको टन्सिलमा यस्ता क..
विद्यार्थीलाई योगको फाइदा के ?
सुजिता बस्नेत योग प्रशिक्षक शारीरिक विकाससँगै मानसिक विकास पनि भइरहने उमेर समूहका बच्चालाई योग महत्वपूर्ण हुन्छ । स्कुल, कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई योगले झन् क्षमतावान् बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक विकास गराउने योगासनहरू दैनिक केही समय गराउनु फाइदाजनक हुन्छ । यस्ता योगाभ्यास तथा प्राणायामले बच्चाम..